Gịnị bụ Magento na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ Magento na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce
Magento bụ ikpo okwu e-commerce na-emepe emepe, nke na-enye ndị niile na-ere ahịa ọnlaịnụ na ndị nwe azụmaahịa usoro ụgbọ ala ịzụ ahịa na-agbanwe agbanwe, yana njikwa zuru oke n'akụkụ niile, ọdịnaya na arụmọrụ nke ụlọ ahịa n'ịntanetị. Magento na-enye katalọgụ zuru oke nke ngwa njikwa, ahia na njikarịcha ihe nchọta, ya mere a na-ahụta ya dịka otu n'ime usoro ntanetị kachasị mma dị taa.
Na mgbakwunye, na Ike Magento na-enye ohere ịbawanye ụlọ ahịa site na ngwaahịa ole na ole na mkpa dị mfe iji gbasaa ruo ọtụtụ iri puku ngwaahịa na-enweghị ịgbanwee nyiwe. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ na-enye ọtụtụ isiokwu dị mkpa yana plugins na-enye ohere iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa.
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke Magento dị ka ikpo okwu maka Ecommerce, bụ na e mepụtara ya dịka ngwa nke onye na-enweghịdị onye nwere ihe mmepe nwere ike iji ya. Cheta na site na ulo ahia intaneti enwere otutu ihe ndi kwesiri ka hazie ya n'uzo ha gha eme nke oma dabere na uzo i nwere ahia.
Otú ọ dị, mgbe achọrọ ịrụ ọrụ ahaziri iche, ọ bụ ebe a chọrọ mmemme dị mgbagwoju anya, mana ọbụlagodi na ị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkuzi na nkwado ntanetị iji mee nhazi ziri ezi.
Banyere uru nke iji Magento, Nke mbu, ekwesịrị ikwu na nke a bụ ikpo okwu nke dị mfe ịwụnye, gbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na plugins. Ọbụghị naanị nke ahụ, teknụzụ mepere emepe na-enye ngwọta e-commerce nke nwere ike ịbawanye ma na-agbanwe agbanwe, na mgbakwunye na ikpo okwu na-enye ohere nkwụnye ego na nkwalite dị iche iche n'oge ndebanye ịzụta, ọ na-enye nkwado maka ihe karịrị 50 nkwụnye ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ihe omume » Kedu ihe bụ Magento na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce
Ihe dị iche na SEM na SEO nke ibe weebụ